ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကူညီပါရန်လှုပ်ရှားမှုကိုယူ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများစုအဝေးမှအလုပ်မလုပ်. စေတနာ့ဝန်ထမ်းကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ, ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုဘာသာပြန်ဆိုကူညီပေးနေ, နှင့်အွန်လိုင်းဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်ပွား. လုပ်အားပေးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
သငျသညျအောင်မြင်သောပေါင်းစည်းမှုများအတွက်အရေးအပါဆုံးအရာတစျခုပေးကူညီခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသည်တစ်ဦး၏အသက်တာ၌တစ်ဦးခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်: ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်. ယခုလှူဒါန်းမှု Make.
အဆိုပါ RCO အကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်နှံ့
ကြှနျုပျတို့၏ website အကြောင်းကိုမသိစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမျှဝေ. သငျသညျဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ therefugeecenter.org အကြောင်းကိုသိကြစေရန်သင့်ဒေသခံရပ်ရွာထဲတွင်ဖြန့်ဝေဖို့အဝေးရောက်ပစ္စည်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. ယခုတောင်းဆိုမှုပစ္စည်းများ.
ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအောင်. ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ပတ်သက်. Read.
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒအဖို့အရေးကြီးတယ်အပြောင်းအလဲများအပေါ် updated သိမ်းဆည်းထားပါ. ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အကြံပြုချက်များကိုလေ့လာပါ. အတင်းအကျပ်နေရာရွှေ့ပြောင်း၏လယ်ပြင်တွင်ဆန်းသစ်သောအသစ်သောအဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပါ.
သင်သည်သင်၏စာသင်ခန်းထဲမှာဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကျောင်းသားများကိုရှိသည် Do? သင်တို့သည်ဤကျောင်းသားများကိုအောင်မြင်ဖို့ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါ.
ကျွန်တော်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း 501(က c)3 အကျိုးအမြတ်မယူအဖှဲ့အစညျး. ကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားအသစ်ရောက်ရှိလာသောထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာရောက်ရှိဖို့နည်းပညာကိုအသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
မစ်ရှင်, ရူပါရုံကို, တန်ဖိုးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနည်းပညာကို အသုံးပြု. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသစ်သောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများနှင့်ရူပါရုံကိုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ Read နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်. ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများကိုသွားပါ.
ဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းဖို့လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျဒုက္ခသည်များ USA တွင်အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးသည်ကြောင်းနည်းပညာနှင့်ပညာရေးကိုထောကျပံ့.